I-GRIPS ZOKUFA: UNYAKA WOPHONONONGO LWEALBHAMU YE-SNITCH - IINDABA
Iprojekthi ye-rap yengxolo evakalayo iyehla kwisiginesha yabo yonyana kwaye ihlala ingumbono wezopolitiko kwaye iphazamisekile ngokuqhubekayo.
Dlala iTrek Ukugcinwa kukaLindaIimpawu zokufaUkuhamba SoundCloud
Kwinkqubo yokuzama ukonakalisa ikhondo lomsebenzi wabo ngalo lonke ixesha, i-Death Grips yaba ngamagcisa emisebenzi. Nokuba uhlela njani imveliso yazo ukuza kuthi ga ngoku, iprojekthi yobugcisa bengxolo ye-rap ifikelele kwi-albhamu enye ngonyaka, ngokwahluka ngokwaneleyo kunye nolawulo lomgangatho ukwenza ukuthanda kwabo okanye abayi kuphula ingxolo yangasemva. Bakhuthele, bathembekile ngokuthe ngqo, nkqu. Ke ekukhululweni kwabo kwe-10 kwiminyaka esixhenxe, Unyaka weSnitch , IiGrips zokuFa zihlala zikholelwa kubupolitika, ziphikiswa ngokuqhubekayo-ngegama nje, zincedisiwe. Kuyinto encinci. Mhlawumbi nokuba kuyathuthuzela.
Unyaka weSnitch yenza kube lula ukubona ukuba ubunjani babo bunokuba bungene njani kumculo womculo wanamhlanje ocociweyo. Ukudityaniswa kwe-nu-metal kunye ne-SoundCloud rap kungenzeka ukuba yenzekile nokuba kunjalo-ngokufanayo neebhonkers, i-jump-cut-metalcore yeebhendi ezinje ngeKhowudi Orange kunye nomthambo-kodwa kuyenzeka ukuva icwecwe labo lomhlaba ngo-2012 Ivenkile yeeMali njengophumezo oluthambileyo lwento eyayiza kuza-umxholo wokuqonda uhlobo lomculo onzima onxulunyaniswa nobunzulu be-CrossFit okanye i-Mountain Dew-fueled eSports.
Nangona kunjalo, utyikityo lwonyana oswelekileyo i-Death Grips luphelele ngokupheleleyo kubo kangangokuba alunakukhutshwa nangayiphi na into emfutshane yeparody. Ingqina ukuba ikwazi ukuziqhelanisa nenani lezandi eliya lisanda ngokwanda Unyaka weSnitch . I-mid-'90s igubu 'n' bass ibetha ngee-shoegaze guitars? Ukufa kweGrips kwi-Intanethi ngokuqinisekileyo kuya kuzama ukwenza i-Dreamcast Teenage Riot. Kuthekani ukuba i-Death Grips ihambe nge-rockabilly? Ngaba akukho mntu ubuza lo mbuzo, kodwa uthixo akusikelele ngokudana ngokusinika impendulo. Ngaba i-Streaky MC Ride ihlatyiwe kwi-trap-rap okanye kwi-strip club umhobe? Kunzima ukuxelela ngokusuka kumazwi ayo, kodwa xa icwecwe lisongela ukukhutshwa ngokupheleleyo, kulapho isigubhu esicacisa nesonakalisayo njengeZach Hill ibanga isandi sibe yinto efana nebhendi edlala ingoma.
Ngokubhekisele kwinto ekuthiwa yi-Death Grips ngenene ngeli xesha, uLinda's e-Custody ubhekisa ku-Linda Kasabian, ilungu le-Manson Family-ubungqina obuphambili bokutshutshiswa kwabo. Wajika i-69 ngoJuni 21, umhla lowo Unyaka weSnitch ukuvuza. Andazi ukuba yayiyinjongo ye-Death Grips, kodwa ubuncinci omnye wabalandeli babo bokwenza iyelenqe kubonakala ngathi bacinga njalo Ubuchule . Ukuba ukubhekisa kwizichazi kubonakala ngathi yinto engaxolelekiyo, ndingatsho ukuba yinto engekho mthethweni ukujonga nayiphi na ialbham ye-Death Grips ngaphandle kokujonga indlela abalandeli babo abaza kudibana ngayo nayo. Ukwamkela ukuba ubukho beprojekthi yonke ibe kukucaciswa kwenkcubeko enzulu ye-intanethi sisiqalo sencoko: Yintoni iLil Pump kwi-SoundCloud, yeyiphi iCar Seat Headrest ekuyi-Bandcamp, i-Death Grips ukuya kwi-4chan. Ndiyathetha, isihloko se-Death Grips sikwi-Intanethi sisalathiso sesinye sazo Iimpawu zentsholongwane -Ngakhange kwenziwe kwa-Kanye oko okwangoku.
I-MC Ride ibinzana elinqabileyo kakhulu leemvakalelo ezinokufundeka-ndifuna ukuba ngasese, okanye, Olu luphawu / Ayisiyiyo inkwenkwe yakho- kubonakala ngathi iyaphikisana ne-Death Grips ukuba yomelele ngaphakathi kwendawo yenkonzo yabalandeli. Ngaba ikho inqaku labo yenza ividiyo yeShitshow ukuba ibingazukuvalwa kwiYouTube ngokwaphula imigangatho yayo yokuziphatha? Ukusetyenziswa kwabo kwezwi lomenzi wefilimu u-Andrew Adamson kwilizwi elithethiweyo lokungenelela kwi-Dilemma uziva ehlengahlengisiwe ukuze abambe ii-Grips zokuSebenza eziSebenzisiweyo noMlawuli Shrek iintloko. Ngethamsanqa ukuzama ukubona isixhobo se-bassist sikaJustin Chancellor ngaphandle kweekhredithi, kodwa ungatsho ukuba i-Death Grips inxulunyaniswe mhlawumbi nebhendi ekuphela kwayo efumana uthando ngakumbi kwiwebhu enzulu kunaleyo bayenzayo. Elona galelo liphawuleka kwi-albhamu livela ku-DJ Swamp, iqhawe elalikhe lakhenketha no-Beck kunye noMphathiswa, osasaza imveliso yakhe kulo lonke.
Yonwabela ithuba lokuba Shrek, Isixhobo, kunye nabalandeli bakaBekk banokusebenzisa konke oku kungentla njengendawo yokungena kwiiNdawo zokuFa, kunye Unyaka weSnitch inokujongwa njengeyona albhamu yabo ixhaphakileyo okwangoku. Ngokunokwenzeka, bonke babonakalise ubukhulu becala ukubhenela kwilinge eliguquguqukayo elibizwa ngokuba yi-Death Grips: ubundlobongela, ingxolo, uburharha ngamatye, ukuzithoba. Ewe kunjalo, njengayo yonke i-albhamu yokuFa, Unyaka weSnitch imalunga nemizuzu eli-10 inde kakhulu. Ngokufana no-2016 Umngxuma ongenasiphelo , eli cwecwe alingomsebenzi obuthathaka ngokubonakalayo kunokuba Ivenkile yeeMali okanye AKUKHO UTHANDO olunzulu kwiWebhu , kodwa njengayo yonke into yokufa, imicimbi yomxholo. Ndikhe ndabona iFootage kunye neHacker yayiziingoma ezihambelana nomculo, kunye nezimbozo zabo zangaphambili zealbham kunye nokuqina kwakungekho ngaphezulu kwe-shitposty kunakuyo ngoku. Kodwa ezo zinto zeza xa iiGrips zokuFa zazisondele ngendlela eyothusayo ekubeni yeyona nto ixhalabisayo, i-cocktail ekujoliswe kuyo iMolotov xa ithelekiswa Unyaka weSnitch , i-M-80 iqhushumbe kwindawo engenanto — iziqhushumbisi, kumnandi njengesihogo, kodwa kuswele ithagethi ecacileyo yokuyinika intsingiselo.
kanye west - iintshatsheli
I-nina simone yamaxwebhu e-netflix
abamhlophe banemigca ibhola kunye nebhisikidi
umzalwana uphi iingoma
I-greta evela kuphononongo lwe-albhamu
usuku lokukhupha i-funk